Masaajidka Fittja oo weerar lagu waxyeeleeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masaajidka xaafadda Fittja ee degmada Botkyrka. Sawirle: Otto Marand/Sveriges Radio
Masaajidka Fittja oo weerar lagu waxyeeleeyey
La daabacay måndag 18 november 2013 kl 17.13
Shaqaalaha masaajidka ku yaal xaafadda Fittja oo koonfur kaga aaddan magaalada Stockholm ayaa maanta barqadii markii ay yimaadeen arkay waxyeelooyin loo geystey dhismaha masaajidka. Sidaasna waxaa boggiisa Internet ku daabacay wargeyska Aftonbladet.
- Qof aan la aqoon ayaa burburiyey muraayadihii masaajidka, isla markaas waxyaalo gudaha ugu tuuray. Waxyaalahaasna waxay boliiskii halkaas tegey ku sheegeen in ay u badnaayeen in yihiin cago doofaar, sida uu Ulf Lindgren, oo wararka u qaabbilsan boliiska Stockholm u sheegay wakaaladda wararka ee TT.
Boliisku waxay weerarkaan cinwaan uga dhigeen sharaf-dil dad bulshada ka tirsan iyo waxyeelo hanti, sida sheegay Ulf Janzén, oo madaxa ka ah saldhigga boliiska ee Södertörn oo isagu hoggaaminaya hawsha arrintaan lagu baarayo.
Weerarkaani wuxuu dhacay intii u dhexeysey axaddii gelinkii dambe iyo sibaxnimadii isniinta.
Ciidamada boliiskuna ilaa hadda ma hayaan dad markhaanti ka ahaa dhaxdadaas iyo cid la tuhunsan yahay toona.